Olee Ihe M Ga-eme Ka M Na-emekwu nke Ọma n’Ule? | Ndị Na-eto Eto
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kinyarwanda Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Nepali Norwegian Ossetian Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tiv Tsonga Turkish Ukrainian Umbundu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Olee Otú M Nwere Ike Isi Na-emekwu nke Ọma n’Ule?
Echela na ị gaghị emeli nke ọma! Ọ bụrụ na ị na-eche na ị gaghị emeli nke ọma, ọ ga-eme ka ị ghara ịna-eme nke ọma. Mgbe ọ bụla ịna-eche na ị gaghị emeli nke ọma, gbalịa na-eche na ị ga-emeli nke ọma. Dị ka ihe atụ, mgbe ndị mmadụ kwuru na Pọl onyeozi amaghị okwu ekwu, ọ sịrị ha: “ Ọ bụrụgodị na abụghị m ọkà n’ikwu okwu, n’ezie, adịghị m otú ahụ n’ihe ọmụma. ” (2 Ndị Kọrịnt 10:10; 11:6) Pọl ma ebe ndị ọ na-anaghị emecha nke ọma. Ma, ọ makwa ebe ndị ọ na-eme nke ọma. Gịnwakwanụ? Olee ebe ndị ị na-eme nke ọma? Ọ bụrụ na o nweghị nke i chetara, gagodị jụọ dimkpa gị na ya na-adị ná mma? O nwere ike inyere gị aka ịma ebe ndị ị na-eme nke ọma. O nwekwara ike ịgwa gị otú ị ga-esi na-emekwu nke ọma.
Mee ka ịmụ ihe mara gị ahụ́. O nweghị otú ị ga-esi mee nke ọma n’ụlọ akwụkwọ ma ọ bụrụ na ị naghị amụ ihe. Mee elu mee ala, i kwesịrị ịmụ ihe. E nwere ike ị naghị achọ ịmụ ihe. Ma, nke bụ́ eziokwu bụ na ịmụ ihe bara ezigbo uru. Ọ bụrụ na i jisie ike na-amụ ihe, ọ ga-abịa na-atọ gị ụtọ. Ihe ga-enyere gị aka ka ịmụ ihe mara gị ahụ́ bụ ịhazi oge gị ahazi. Ọ bụ eziokwu na Baịbụl kwuru na e nwere “ oge ịchị ọchị ” na “ oge iwụli elu. ” Ma, cheta na ịmụ ihe dị ezigbo mkpa. (Ekliziastis 3:1, 4; 11:9) I kwesịkwara iwepụta oge ị ga-eji na-atụrụ ndụ otú ndị na-eto eto ndị ọzọ na-eme. Ma cheta na Ekliziastis 11:4 sịrị: “ Onye na-ele ifufe agaghị agha mkpụrụ; onye na-ele ígwé ojii agaghịkwa ewe ihe ubi. ” Gịnị ka ihe a Baịbụl kwuru pụtara? Ọ pụtara na i kwesịrị ibu ụzọ na-eme ihe ndị dị ezigbo mkpa tupu gị emewe ihe ndị ọzọ. N’ihi ya, buru ụzọ mụọ ihe tupu gị egwuwe egwu. Echegbula onwe gị. I nwere oge ị ga-eji mechaa ha abụọ!
Ibuli ihe e ji emega ahụ́ otú e si ebu ya nwere ike ime ka ahụ́ gbasie gị ike, otú ahụ ka ịgụsi akwụkwọ ike nwere ike ime ka ị na-eme nke ọma n’ụlọ akwụkwọ